Umlando Nokuziphendukela Kwemvelo Kwamalogo Ezimoto | Martech Zone
Ukubona okubonakalayo kubaluleke kakhulu kunalokho abantu abaningi abakholelwayo. I-logo ayimane imele umkhiqizo, imvamisa inezincazelo eziningi futhi ingalandelela nomlando wenkampani. Izinkampani eziningi ziyamelana nokushintsha i-logo. Kungenzeka ukuthi basebenzise imali eningi ukufaka uphawu lokushicilela, noma bakhathazekile ngezindleko nomzamo odingekayo lapho kwenziwa kabusha igama.
Ngiyakholelwa ngokuqinile ekwenzeni ngcono ilogo yakho ukuyigcina ifanelekile ekukhuleni nasekuvuthweni kwenkampani yakho - kanye nokuyigcina yesimanje futhi ifanele izethameli zakho. Uma kunemboni eyodwa lapho ukuguqulwa kwelogo kubiza - kuyimboni yezimoto. Amalogo awekho nje kuzo zonke iziqephu zesibambiso, atholakala yonke indawo emotweni yakho.
Bheka ngokuzayo lapho ungena emotweni yakho… ku-hood, izibani zomnyango, amacansi aphansi, igumbi leglavu, isiqu, ama-ekseli amasondo, ngisho nasenkulumweni yenjini. Futhi manje ngezibonisi zokulungiswa okuphezulu, zimelwe ngokwamanani. Imayini ize ijikeleze futhi indizele esikrinini.
Uma uhlolisisa lawa ma-logo, uzobona ukuthi cishe ngaso sonke isikhathi anohlobo oluthile lokubukeka nokuzizwa kuwo. Ngicabanga ukuthi lokho kucishe kube yimfuneko ngoba bakhiwe kuyo yonke imoto. Abadwebi bendabuko bendabuko bavame ukukuzonda lokho ngoba babejwayele ukuqinisekisa ukuthi ama-logo abukeka emahle kokumnyama nokumhlophe, emshinini wefeksi, kuya odongeni lomdwebo. Lezi zinsuku zisemuva kakhulu kithi, noma kunjalo.
Njengoba ama-logo aqhubeka nokuvela, anginaso isiqiniseko sokuthi bayoke bahambe ngokuphelele ... kodwa ngicabanga ukuthi bazoqhubeka nokujula nobukhulu kubo. Ngisho nemiklamo eyisicaba yayinezingqimba zokujula.
Okufakwe ku-infographic yi-Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Fiat, Ford, Mazda, Nissan, Peugot, Renault, Škoda, Vauxhall, neVolkswagon. Ngifaka i-Chevrolet ngemuva kwe-infographic yethu ngakolunye uhlangothi lwesiziba.
Tags: alfa romeologo ye-alfa romeoi-aston martinlogo ye-aston martinAudiilogo yomsindoama-auto logoBMWlogo ye-bmwcadillacilogo ye-cadillacukubuyekezwa komthengisi wezimotofiatilogo ye-fiati-forduphawu lwe-fordlogo kwemveloumlando we-logomazdalogo ye-mazdaNissanlogo ye-nissankancanelogo ye-peugotrenaultilogo yokuvuselelaisihlaloilogo yesihlaloskodauphawu lwe-skodaelsizilogo yevauxhallumagabailogo ye-volkswagon
Imfumbe: Ukudalwa kokuqukethwe komphakathi kwenziwa kwaba lula